AmaBoerboels: Ngabe lolu hlobo luhlasele kakhulu ukuba lube yinja yomndeni? - Izinhlobo
AmaBoerboels: Ngabe lolu hlobo luhlasele kakhulu ukuba lube yinja yomndeni?
Obeye aziwe njengo IBoerboel yaseNingizimu Afrika , UMastiff waseNingizimu Afrika , UBole , noma UBurbull , Inja yeBoerboel (ebizwa ngokuthi 'boo-er-bull') ungumqaphi osabisayo futhi lowo othambile omkhulu.
Ungakhohliswa ukubukeka kwayo okunolaka ngoba bayalingana ezolile futhi enobungani emndenini , ikakhulukazi uma besondelene nezingane.
Uma le pooch ikhiphe ilukuluku lakho futhi unentshisekelo, uzothola konke odinga ukukwazi mayelana nohlobo lapha.
Umsuka: Ukufunda lapho amaBoerboels avela khona
Inja yeBoerboel ibukeka kanjani?
Ubumnene beBoerboel nokuba neyodwa njengesilwane esifuywayo
Izinkinga zezempilo zeBoerboel
Ungayithenga kuphi imidlwane ye-Boerboel?
Ukuzala kuqhathaniswa namaBoerboels
Kufanele uthole iBoerboel noma cha?
Izinhlobo zeBoerboel zazivela endulo Izinja zohlobo lweMolosser cishe maphakathi ne-1600s e-Afrika.
Igama layo lanikezwa ngabahlali baseDashi, baseJalimane, nabamaHuguenot, lapho igama elithi 'Boer' lisho umlimi kanti elithi 'ibele' lisho inja. Yigama elidala lesiDashi / lesiBhunu elihumusha ngokuthi “inja yomlimi.”
Yize kungaqiniseki ukuthi iziphi izinhlobo eziqondile ezahlanganiswa ukudala iBoerboel, kuyaziwa ukuthi kuphela ama-canine asinda ahlangana nezilwane zasendle kanye nezimo zezulu ezinzima kusetshenziselwa ukukhiqiza le pooch enkulu.
UJan van Riebeeck , umsunguli weCape of Good Hope kanye nendawo yokuhlala yamaDashi, waletha uhlobo lwe-mastiff olwalukhuliswa namanye ama-hound kanye nemastiffs yabanye abahlali. Bayibiza IBullenbijter noma iBullenbeisser - inja yokulahla inkunzi engasekho.
Ukuzala izinja zegazi laseYurophu eNingizimu Afrika kwaletha iBoerboel engenamqondo.
Imodi yokuzenzakalelayo yenja yomlimi ikhona qapha futhi ukuvikela imizi , kepha ukuthuthuka okuqhubekayo kwaveza amaBoerboels. Baqale bakhuliselwa ukukhonza njenge- umugqa wokuqala wokuzivikela ezilwaneni ezidla ezinye njengezimpisi, amabhubesi, izingwe namaphakethe ezimfene eziphanga. Ekugcineni, zisiza futhi ukulandelela nokubamba umdlalo olimele.
Umlando weBoerboel yaseNingizimu Afrika akumele uholele esiphethweni sokuthi bangamahloni noma banonya. Nabo futhi uhlakaniphile futhi ebucayi , ebasiza ukuthi bahlukanise umngane nesitha. Kepha amaBurbulls anjalo akwaziwa ukuhlehla noma nini lapho becasukile.
NgoJanuwari 1, 2015, lo mhlobo wamukelwa ukuba yingxenye ye- I-AKC Working Group , kodwa zirekhodwe ngaphansi kwe-Foundation Stock Service yeklabhu kusukela ngo-2006.
Ukuqonda isizinda nenhloso yamaBoerboels kubalulekile. Kuyindlela yokwenza gcina izimfanelo zabo ezihlukile kanye nobunikazi njengoMastiff waseNingizimu Afrika.
Lo mphindiseli obukeka emuhle unobuso obufaka i- imaski emnyama , ngamehlo abanzi nakavundlile anemibala ensundu noma emnyama nakakhulu. AmaBoerboels anekhanda eli-blocky futhi elibanzi, futhi imihlathi enamandla .
Ngokuya nge- ukuzala okujwayelekile , iBoerboel yinja enkulu lokho ngamandla futhi kwemisipha . Banalokhu kubukeka kokuzethemba okuhlangene nomnyakazo wabo we-agile futhi ogeleza ngokukhululeka.
Ungawathola amaBoerboels anomsila omude, oqondile, noma omfushane omiswe ethekwini. Ngokuya ngemvelaphi yayo, ukumisa imisila yazo kwenzelwa ukusebenziseka.
Ngomsebenzi wabo njengabavikeli bepulazi, ngeke babanjwe kalula yizilwane zasendle abangase bahlangane nazo, njengezimfene. Ukuthungwa komsila akukho emthethweni kwamanye amazwe, noma kunjalo.
Angaba makhulu kangakanani amaBoerboels?
AmaBurbulls anesisindo esimaphakathi se- Amakhilogremu ayi-150 kuye kwangama-200 (68 kuya ku-91 kg). Uma uzoqhathanisa ubude ngobulili, abesifazane cishe Amasentimitha angama-22 kuya kwangu-24 (53 kuya ku-61 cm) ubude. Abesilisa bakhulu ngobude be- Amasentimitha angama-24 kuya kwangu-27 (61 kuya ku-69 cm).
Ukucabanga ngohlobo lwalolu hlobo nosayizi wazo, amaBoerboels nakanjani AKALUNGILE ngokuhlala efulethini. Bebezothuthuka ekhaya elibanzi - elilodwa elinamagceke kanye nocingo oluphakeme.
Ungabona ukuthi amakhulu amaBoerboels ngokubuka u-Alpha noDixie lapha, ekukhombisa ukuthi kungani udinga ikhaya eliphephile uma ungumnikazi walolu hlobo lwenja:
Ijazi lamaBoerboels nombala
Ama-Mastiff aseNingizimu Afrika yiwo kabili-camera ama-canine ane- iqonde futhi imfushane ijazi, bese kuba yangaphansi eminyene futhi ethambile.
Uzobona lolu hlobo ngohlobo olunombala onsundu, obomvu, obomvu, ubrindle nomnyama. Abanye banamabala amhlophe eboyeni babo, ikakhulukazi nasebusweni, entanyeni nasezidladleni. Ama-Burbulls amaningi anezimpawu ezimnyama noma amabala amnyama azungeze amehlo, impumulo, umlomo nezidladla.
Uma ubheka isikhumba sabo, kufanele kube njalo kumnyama njengoba i-pigment iyadingeka kulokho abazalelwe kona. Isebenza njengenja ukuvikelwa ekushiseni .
Amabhali anjalo ama-sheddi aphakathi nendawo . Ngokungafani nezinye izinhlobo, azidingi ukuzilungisa okuningi, esizoxoxa ngakho kancane.
Le canine enemilenze emine iyakwazi ukuba umngane oqotho futhi njengenja esebenzayo. AmaBoerboels enza izinto ezihlukahlukene, kodwa ajabula kakhulu lapho enikezwa umsebenzi.
Uma ufuna i- umlindi , lolu hlobo luwufanele umsebenzi. Bathanda ukuchitha isikhathi nomndeni wabo futhi bazinikele ekuvikeleni abantu babo ababathandayo. Kepha ngaphandle kokuqeqeshwa okufanele kanye nokuhlangana nabantu, bona ingaba nolaka futhi ivikele ngokweqile .
Noma nini lapho bezungeze izingane, ama-Burbulls akhona ukudlala . Ukugadwa kuyanconywa, noma kunjalo, ngoba bangajabula kakhulu, futhi bangashayisa omncane wakho ngengozi. Ngesikhathi sokudlala, gcina inja yakho ikhululekile. Ngenxa yesifiso sayo semvelo sokuzivikela, angahumusha eminye imidlalo njengolaka futhi enze okuthile ukuvikela umndeni wakhe.
Bheka nje le vidiyo bese ubona ukuthi le ngane neBoerboel yakhe ayinakuhlukaniswa kanjani:
Lokho kuya kwezinye izilwane ezifuywayo noma izinja, futhi. Banesici sokuba indawo enolaka . Uma bekhuliswe kanye nezinye izilwane ezifuywayo, iBoerboel yaseNingizimu Afrika izokwenza kahle ngabo.
Ngabantu abangajwayelekile nezinja, amaBoles angaba njalo ukuma , ikakhulukazi uma kungowobulili obufanayo. Bona zivame ukuncintisana . Bangase bafaneleke ngokwengeziwe ukuba babe yinja kuphela endlini. Uma ufisa ukuthola okubili kwalokhu, qiniseka ukuthi banobulili obuhlukile.
Lokho akusho ukuthi kufanele ugcine iBoerboel yakho ivalelwe esitokisini noma uyishiye ngaphandle kwendlu. Lolu hlobo angaba nesithukuthezi futhi akhathazeke . Uma ungabanaki noma ungabanaki, baba abangaphephile, abanenkani, nabalimazayo.
Ngezinsuku ezithile ongeke uhlinzekele ukuhamba okude nezikhathi zokudlala ezinamandla, kuhle ukutshala imali kwamanye amathoyizi asendlini afana amabhodi ephazili . Inganikeza nokukhuthazeka kwengqondo ngenkathi ijabulisa iBurbull yakho.
Ingabe izinja zeBoerboel ziyingozi?
Bangaba uhlobo oluyingozi ukuba nalo, kepha kulapho ukuqeqeshwa kungena khona ukulangazelela ukujabulisa futhi okuqeqeshwayo , kepha kufanele baqeqeshwe futhi bahlanganyele njengomdlwane ngaphambi kokuba babe ngabantu abadala.
I-Bole idinga umnikazi nomqeqeshi ozinikelayo, onesineke, futhi ongaguquguquki ukuvimbela ukuhlukunyezwa. Uma unentshisekelo kule doggo, kufanele ukwazi ukubeka imingcele ngaphandle kokuba nokhahlo.
Imidlwane ye-Boerboel iqala njenge-furballs elula futhi elula kodwa ungalindeli ukuthi ihlale injalo. Lezo zimfanelo ziyaphela, ngakho-ke badinga ukuhleleka, ukuqeqeshwa kokulalela isikhathi eside .
Kwenze lokho, futhi uzoklonyeliswa ngenja ezokwenza kahle emincintiswaneni efana nokudonsa isisindo. Ngenxa yendawo ethambile yohlobo lwezingane, nazo ziyizinja zokwelapha eziphumelelayo.
Uma ungaqeqeshiwe futhi uphathwa kabi, uMastiff waseNingizimu Afrika angaba yingozi. Ngaphandle komlando wayo wokuba namandla ngokumelene nezidalwa ezinkudlwana namandla okuluma afinyelela ku- I-800 PSI , kunamarekhodi we Ukuhlaselwa kweBoerboel .
Yize ungeke uwathola amaBoerboel ohlwini lwezinja eziyingozi kakhulu, angomunye wawo izinhlobo ongafanele uzihlanganyele nazo .
Ukuqeqesha ama-Boerboels ukuthi abe nolaka
Lesi sigaba kungenzeka ukuthi ubuze ukuthi, 'kungani bengifuna iBoerboel yami ikhombise ubudlova?' Kepha abanye abanikazi bakwenza ukuze iBurbull yabo ikwazi ukusebenza njengezinja zokuqapha.
Noma ngabe ukuhlukunyezwa kunenhloso, kubalulekile ukuthi ufundise inja yakho yazi izinga nesimo esifanelekile . Kufanele bafundiswe ukubamba imizwa yabo.
Ngalokho kusho, umuntu kufanele wazi umehluko phakathi kwenja ehlaselayo nenja yokugada.
Akusho nokuthi abanikazi be-African Boerboel kufanele ukuqeqesha ngamabomu ukubahlasela noma babe nolaka. Lokhu kwenzelwa labo abakhetha lolu hlobo ngokukhethekile ukuligada noma ukulivikela, ikakhulukazi labo abahlala ezindaweni zasemakhaya.
Ungambona uMastiff waseNingizimu Afrika esebenza lapha ngenkathi enza uqeqesho lokuvikela:
Ukunakekela iBurbull elula . Badinga kakhulu ukukhuthazwa ngokomzimba nangokwengqondo, ngakho-ke kufanele ukhathazeke kakhulu ngokuba nesikhathi sokudlala nokuzivocavoca umzimba okuningi.
Noma kunjalo, njengezinja eziningi, kufanele siqiniseke ukuthi izilwane zethu ezifuywayo ziyalungiswa futhi ziyondliwa. Kumele futhi sithathe izinyathelo zokuphepha uma kukhulunywa ngempilo yabo.
Ukuzilolonga iBoerboel yaseNingizimu Afrika
Amabhali angamakheli alinganiselayo, ngakho-ke ukuxubha kanye nokugeza njalo ngenyanga ngizokwenza njalo. Ukuhlanza umngani wakho we-canine ngeke kususe uboya obuthuthukile kuphela, kepha kuzogcina ijazi liphilile ngokusabalalisa uwoyela wesikhumba futhi kukhuthaze ukukhula kwezinwele.
Ngaphandle kwalokho, izipikili kufanele zigundwe kabili ngenyanga, izindlebe kufanele zihlolwe masonto onke, namazinyo kufanele abhululwe kanye ngesonto.
Imikhuba yokudla yeBoerboel
Ungondla noma yiluphi uhlobo lokudla lweBurbull yakho - ama-kibbles owomile, ukudla kwenja emanzi, ne-BARF.
Okudingayo ukugxila ekunikezeni ukudla kwenja okunokulinganisela kokudla okunempilo okwenzelwe ubudala be-fido yakho, usayizi, nezinga lomsebenzi wakho. KumaBoerboels, kungcono aqinisekise ukuthi athola i-calcium, i-phosphorus, namaprotheni.
Uma ukhetha ukudla kwenja eyomile, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi isikhwama ngasinye sihlukile ngosayizi, izithako, nezindebe ezinikeza iziphakamiso. Indlela enconyelwe kakhulu yokwazi ukuthi yondla kangakanani iBoerboel yakho ngama-calories.
Imidlwane yase-South African Mastiff idinga mayelana Amakholori angama-55 ngephawundi ngalinye yesisindo sabo somzimba. Qhubeka nalokhu kukhonza baze babe nezinyanga eziyi-18 ubudala.
I-canine ngayinye yehlukile, ngakho-ke ungasebenzisa i- umshini wokubala ukuthola inani elilinganisiwe lama-calories uBole wakho okufanele alidle nsuku zonke.
Ukuze uthole umhlahlandlela wokondla amaBoerboels, ungakubheka lokhu isixhumanisi .
Ngabe uMastiff wase-Afrika udinga ukuzivocavoca okungakanani?
Okungenani amahora ama-2 yokuzivocavoca nsuku zonke kwanele. Le canine iyasubatha futhi izodinga ukuxhumana okuqhubekayo nokukhuthaza, kokubili ngokwengqondo nangokomzimba.
Noma kunini lapho uhamba khona isilwane sakho se-Bole, sigcine ku-leash, bese uqhubeka nokudlala endaweni evikelekile. Akulungile futhi ukumletha emapaki ezinja ngoba lolu hlobo aluthathi ngomusa kwamanye ama-canine alubekela inselelo.
Esikhundleni salokho, ungaba neBurbull yakho ukuncintisana futhi ujoyine ezemidlalo njengokuqina, i-rally, nokulalela.
Sifundile ngemvelaphi yabo ukuthi bakwazi ukusinda ezimweni zezulu ezinzima eNingizimu Afrika, ngakho-ke singasho ukuthi kunjalo ngokuvamile iphilile . Kepha, kusekhona ukugula okumbalwa okufanele sikuqaphele.
Njengezinhlobo eziningi ezinkulu, amaBole athambekele ekutholeni ukukhuluphala ngokweqile . Le yinto onamandla phezu kwayo. Kufanele uqaphele ukuthi yini oyondla nge-pooch yakho, futhi lokho kufaka ukuphatha. Isikhathi ongeke uzizwe futhi ubone izimbambo zesilwane sakho kanye nesinqe sakho, sekuyisikhathi sokuthi abambe iqhaza ku uhlelo lokuphathwa kwesisindo .
Kukhona futhi ukuqumba noma i-Acute Gastric Dilation, evikeleka kalula. Vele ungamondli umngani wakho onemilenze emine kungakapheli amahora amane ngaphambi kokuzivocavoca futhi kungakapheli nehora ngemuva kokusebenza. Vumela ingane yakho iphumule futhi yehle phansi ngaphambi kokuyondla.
Ezinye izifo i-Boerboels ezibekelwe zona yisifo senhliziyo, indololwane kanye ne-hip dysplasia, i-hyperplasia yesitho sangasese sowesifazane, kanye nezimo ezimbili ezithinta amajwabu amehlo abizwa nge-ectropion ne-entropion.
Ngenkathi ukhuluma nabafuyi, kufanele uvunyelwe ukubona udoti nezimvume zezempilo zabazali babo. Ngokusho kwe- isitatimende sezempilo wenhlangano esemthethweni yokuzalanisa amaBoerboels, izinja kufanele zibe nerekhodi le-OFA (Orthopedic Foundation for Animals) nemiphumela ye-PennHip, ukuhlolwa kwamehlo, kanye nokuhlolwa kwe-OFA okubandakanya i-echocardiogram.
Kepha ngokudla okufanele nokuzivocavoca umzimba, iSouth African Mastiff ine- isikhathi sokuphila seminyaka eyi-9 kuya kwengu-12 .
Ungangena ngokushesha ku-inthanethi futhi useshe izinja nemidlwane yeBoerboel. Kepha ngaphambi kokwenza lokho, kufanele ubheke imvelaphi yabo kanye nemvelo yemvelo.
Amabhali anolaka, ngakho-ke ungahle uthande bheka imithetho ukuthi idolobha lakho, izwe, noma izwe onalo ngalolu hlobo. Uma kungekho emthethweni ukuba khona endaweni yakho, iBurbull yakho izothathwa kuwe.
Nawa amazwe anomkhawulo wokuba ne-Boerboel:
I-Russia (ngokuya ngesitifiketi esiphoqelekile nokubhaliswa)
I-Ukraine (ngokuya nge-microchipping ephoqelekile, umshuwalense wezikweletu zomphakathi, ne-muzzle)
AmaTurkey namaCaicos, iFaroe Islands, neTunisia awavumeli ukungeniswa kwamaBoerboels.
ESingapore, ama-canine akhona kufanele abulawe inzalo, ancishiswe, futhi afinywe ngomlomo, kanye nomshuwalense. Okufanayo kuya eDenmark, futhi abanikazi eRomania kufanele okungenani babe neminyaka eyi-18 ubudala. Kufanele futhi baqinisekiswe ngokwengqondo ukuthi bangabakwaBole.
E-US, yiFairfield kuphela, e-Iowa, lokho kuvinjelwe amaBoerboels .
Uma indawo yakho ivumela ama-Mastiffs aseNingizimu Afrika, ungathenga umdlwane nge Intengo emaphakathi engu- $ 1,400 . NgamaBoerboels avela emigqeni ephezulu yokuzalanisa futhi enozalo oluphakeme, kungabiza kuze kufike ku- $ 7,000 noma ngaphezulu!
Ngaphandle kokucela ukubona abazali be-Boerboel kanye nodoti, kanye namarekhodi ezokwelapha, kufanele futhi ubuze abalimi ngeminyaka yezinja zabo zangaphambilini lapho zifa nembangela yokufa. Izokunikeza umbono wokuthi ingane yeBole ingaphila isikhathi esingakanani kanye nezifo ezingazizuza njengefa.
Ngenkathi ulapha, ake sikusize ukuqala usesho lwakho ngeBoerboel eyakho evikelayo:
IBoerboels USA (UFulton, MO)
Ama-D & K Boerboels (ESt. Louis, MO)
Ama-Black Iron Boerboels (Indiana)
Uma uzwile nge Ama-Elite Boerboels , zitholakala ePortugal naseNingizimu Afrika, lapho lolu hlobo luchuma khona lapho okhokho babo benza khona.
I-American Boerboel Club ine- uhlu yezinhlangano zokutakula ezinikela ngamaBoerboels ukuze zamukelwe.
Kepha lawa mawebhusayithi kufanele abhekwe futhi. Ngaphandle kwama-Mastiff aseNingizimu Afrika, ezinye izinja ziba kwesobunxele ezindlini zokukhosela nasemgwaqweni:
Ukutakulwa Kwezinkukhu Ezinomnene Nokutholwa (I-Riverside County, CA)
Izinja ezinkulu izinja ezinkulu (IDenver, CO)
Ama-Mastiffs kuMutts Rescue Inc. (Chambersburg, PA)
Ngaphandle kwama-canine ahlukahlukene avela kuMolossers, iMastiff yaseNingizimu Afrika nayo kuqhathaniswa namanye ama-mastiffs nezinja ezinkulu lokho kuthathwa njengolaka noma okuyingozi.
Ake sibone umehluko phakathi kweBurbull nezinye zalezi zinhlobo.
IsiNgisi Mastiff vs. Boerboel
Ama-Miffiffs yizilwane ezinkulu, kepha njengamaBole, zingabavikeli abanjalo onemvelo enhle futhi unesithunzi . Bavela e-United Kingdom futhi bakhulu kakhulu kunamaBoerboels anokuphakama kwamasentimitha angama-27 kuye kwangama-30 (70 kuya ku-76 cm) nesisindo esingafinyelela kuma-250 lbs (113 kg).
Lezi zidlakela ezinesizotha zine- ijazi elihle, elibushelelezi ekhipha ngokulinganisela. Umbala wabo wezinwele ungaphansi kwemibala ehlukene yama-fawn.
Njengoba ingenye yezinhlobo ezinkulu kakhulu, i-Old English Mastiff iyi- inja esindayo kunazo zonke emhlabeni .
Kuhle Namuhla angaba made ngamasentimitha ayi-15, kepha awathwali inqwaba nesisindo salesi sigaxa.
Uma kukhulunywa ngempilo, lolu hlobo luvame ukuba nesifo samathambo, i-hip dysplasia, ama-callus ne-hygroma. Futhi banokuphila okuphakathi Iminyaka emi-6 kuya kwengu-10 - mfushane kunesikhathi sokuphila samaBurbulls.
Eyaziwa nangokuthi i- Inja yase-Afrika , i-hound yaseZimbabwe yimigogodla emikhulu emi cishe ngamasentimitha angama-61 kuye kwangama-69 ubude futhi inesisindo esingamakhilogremu angama-59 kuye kwangama-91 (27 kuya ku-41 kg).
Unekhono ekulandeleni nasekubekeni i-baying, i- I-Ridgeback iyi-fido ephapheme futhi enesibindi, nokho inothando futhi iyadlala.
Banengubo emfushane nebushelelezi ecwebezelayo, futhi uphawu lwabo umugqa noma uboya bezinwele emhlane wabo, yingakho igama. Uzobathola ngemibala yomthunzi kakolweni noma umbala obomvu.
Ngaphandle kokwakhiwa kwabo okubanikeza lokhu kubukeka kwezemidlalo, kunjalo ayisebenzi ngokweqile njengamaBoerboels.
Kufanele wazi futhi ukuthi le nja ayithokozi lapho izingane ezincane zizama ukukhuphuka noma ukuzigibela, ngakho-ke qaphela uma unentshisekelo kulolu hlobo. Ngaphandle kwalokho, kunjalo ziqinile futhi ziyaqeqeshwa , ukubenza umngane ofanelekile noma isilwane somndeni.
IRhodesian Ridgebacks nayo ijwayele ukuba neminyaka eminingi uma iqhathaniswa noMastiff wase-Afrika onempilo ye Iminyaka engu-10 kuya kwengu-14 .
Umhlanga Corso vs. IBoerboel
Isikhathi esiningi, akufanele wahlulele incwadi ngekhava yayo. Zombili lezi zinja zinegama elingalungile ezivame ukunganakwa lapho zithathwa njengelungu lomndeni.
Ifinyelela ukuphakama kwamasentimitha angama-28 nesisindo se- ngaphezu kwama-100 lbs , abantu bavame ukumangazwa yi- Umhlanga Corso (ibizwa njengo / kay-nah-kor-so /).
Kholwa noma ungakukholwa, laba bobabili banezindawo ezithambile zezingane nabantu babo. Kepha ungathembela ekuvikeleni iCane Corso neBoerboel.
Ukuqhamuka e-Italy, iCane Corso inesizinda sezimpi nokuba ngumqaphi. Enye yezici lolu hlobo lohlobo lokuthi uMastiff waseNingizimu Afrika akanayo yilezo ukuthi udinga ukunakwa, futhi abayithandi uma ishiywe yodwa. Futhi bane- izinga lamandla aphakeme kunama-Burbulls.
Ihlukaniswe ngaphansi kwezinja ze-Terrier, i- I-American Pit Bull yaqala e-United States enomlando omnyama wokusetshenziswa “njengesithixo.”
Eyaziwa nje ngokuthi Pitbull , lezi zinja zinobude obungamasentimitha angama-59 kuye kwangama-28 (59 kuya ku-70 cm) futhi zinesisindo esingamakhilogremu angama-149 kuye kwayi-199 (kg kuya kuma-90 kg).
Zakhiwa zisuselwa engqondweni yokuthi “okukhulu kungcono,” kodwa ngenhlanhla, i-American Staffordshire Terrier yavela njengama-canines azungeze ukulima futhi ekugcineni aba izinja zomzanyana .
Noma ngabe unedumela elibi, imigodi iyaqhubeka nokudiliza ukunganaki okubazungezile. Bakwenza lokho ngokugqama ku ezemidlalo nemincintiswano njengokuqina, ukulalela, nokudonsa isisindo.
Noma kunjalo, kungcono kakhulu kubanikazi abanolwazi ukuphatha i-Pittie, ikakhulukazi ngamandla okuluma we 235 PSI . Indlela ephansi uma iqhathaniswa neBoerboels, kepha kuyinto okufanele uyicabangele uma ufuna iPitbull.
I-Kangal vs. IBoerboel
Inja kaKangal Shepherd
I- Inja kaKangal Sheperd luhlobo lokwalusa, olufana kakhulu neBole. Eyaziwa nangokuthi i- IsiTurkey Kangal noma IsiKurdish kangal , le canine ingenye ye- izinja eziyingozi kakhulu ukuba ngumnikazi.
Ekuqaleni zazalelwa ukuqapha imfuyo, amaKangals anesimo esinjalo onokwethenjelwa futhi ukubikezela . Ngalokho kusho, bafaneleka kakhulu kubanikazi abakwaziyo ukuphatha lesi siqhwaga.
Bangaba mnene nomndeni wabo, kepha kungcono ukulawula i ezimele futhi bengesabi inja besebancane.
Uma ucabanga ukuba nenja yamaKurdish Shepherd njengomlingani wakho, qiniseka ukuthi ikhaya lakho lifakwe ngokuphepha ukuvimbela ukweqa nokumba. Kufanele futhi ucabangele ukuthi lolu hlobo luyakuthanda khonkotha kakhulu .
Uma kukhulunywa ngokuqina, amaKangal angafinyelela ngaphezulu Amamayela angama-30 (Ama-50 km) ngehora, cishe amaBoerboels asheshayo anejubane eliphezulu Amamayela angama-45 (Amakhilomitha angama-72). Uma uzoqhathanisa amandla okuluma, amaKangals asephelile 700 PSI .
Uma lesi isikhathi sakho sokuqala unenja, ngakho-ke asikukhuthazi ukuthi uthole lolu hlobo oluthile njengoba lunjalo akulula ukuphatha . Ama-Burbulls angaba nezinkinga ezimbalwa zempilo futhi kulula ukuzilungisa, kepha angama-canine ezindawo futhi azethembayo.
Badinga isibambi noma umndeni onolwazi futhi oqinile. Amabhali nawo adinga i- home enikeza isikhala esiningi inja enkulu ukuhambahamba.
Ama-Mastiff aseNingizimu Afrika yiwo ithambekele ekudoneni nasekuhlafunweni , futhi. Ngakho-ke, lokho kungenye imikhuba yabo okufanele bayicabangele.
Uma ucabanga ukuthi wena nekhaya lakho nilungele umlingani onemilenze emine oyinselele, khona-ke nizoklonyeliswa ngomngane ovikelayo nothembekile.
Ucabangani ngamaBoerboels? Ingabe lolu uhlobo ongacabanga ukuluthola? Sazise ukuthi uthini ngalolu hlobo ngokuthayipha imibono yakho ngezansi.
Ngabe i-Australian Shepherd Corgi ixuba inja yomndeni enhle?
Okufanele ukwazi ngenja yeCanis Panther
izinja ze-terrier mix zikhulu kangakanani
ikhanda le-apula izinwele ze-chihuahua ezinde
amagama amancane ezinja zesilisa
impisi nomxube waseJalimane